CORON PEEL MATTE FINISH HEAT TRANSFER PET FILM AN-TOKARISANA FANOMPOANA
JL Heat famindrana ny sarimihetsika famotsorana biby fiompy dia namboarina tamin'ny alàlan'ny horonantsarimihetsika miorina tsara izay natao pirinty tamin'ny famoahana coating. Toy izany koa, miantso ny famoahana famindrana hafanana miaro ny sarimihetsika biby mifono, ny sarimihetsika famindrana hafanana amin'ny alàlan'ny rivotra ihany koa. Ny fenitra fototra momba ny kalitao tsara indrindra amin'ny famindrana ny famoahana horonantsary voaaro dia ny fitoniana aorian'ny famelezana hafanana miaraka amin'ny mari-pana 356 ℉, 1mins, dia mihena manodidina ny 2mm ihany ka tsy hanahirana ny olana amin'ny fizotran'ny hafanana. Natao nanontana lakile vita tamin'ny silk, fanontana lithographic ...
KOREA STANDARD GLOSSY FINISH HEAT TRANSFER PET FILM HANADINOANA AN-KORATRA
JL Heat famindrana ny sarimihetsika famotsorana biby fiompy dia namboarina tamin'ny alàlan'ny sarin-tsarotran'ny biby fiompy tsara indrindra izay natao pirinty tamin'ny famoahana coating. Toy izany koa, miantso ny famoahana famindrana hafanana miaro ny sarimihetsika biby mifono, ny sarimihetsika famindrana hafanana amin'ny alàlan'ny rivotra ihany koa. Ny fitsipika fototra momba ny kalitao famoahana horonan-tsarimihetsika tsara indrindra dia ny fitoniana aorian'ny famoahana hafanana miaraka amin'ny mari-pana 180 ℃ / 356 ℉, 1mins, mihena manodidina ny 2mm ihany ka tsy hanahirana ny fizotran'ny hafanana. Nampiasana be pirinty fanontana lakile, lithographic p ...
TAMIN-TRANO DIA FAMPIASANA VOAFAHANA AN-TRANO AN-TSARA FILM
AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO AN-TRANO
Mety ho an'ny fanamain-drakitra sy fanonerana amin'ny ranomainty miorina amin'ny rano na ranomainty miorina amin'ny solika. Ny coating fametahana, matte tsara dia vita taorian'ny fifindran'ny hafanana, fitsaboana antistatic amin'ny lamosina. JL Heat famindrana ny sarimihetsika famotsorana biby fiompy dia namboarina tamin'ny alàlan'ny horonantsarimihetsika miorina tsara izay natao pirinty tamin'ny famoahana coating. Toy izany koa, miantso ny famoahana famindrana hafanana miaro ny sarimihetsika biby mifono, ny sarimihetsika famindrana hafanana amin'ny alàlan'ny rivotra ihany koa. Ny fitsipika fototra momba ny kalitao tsara indrindra amin'ny famindrana ny famoahana horonantsary miorina dia ny faharetana aorian'ny ...
COLD AND HOTELIA MATELIA MATTE FINISH HEAT TRANSFER PET FILM ANY AN-TENAN-KIRA
Hotely PEEL MATTE FINISH HEAT TRANSFER PET FILM HO ANY AN-KIRA SY FIVAROTANA OFFSET
JL-PA vovoka mafana be menaka dia vita amin'ny polyamide manafatra izay manana fahaizana toetrandro, fitrandrahana elektrika tsara, malefaka, faharetana tsara sy haingana aorian'ny fisasana, fiaretana tsara sy vahaolana fanoherana, fisondrotana rivotra tsara, tsy misy loto, ect.
JL-TPU vovoka menaka mafana dia vita amin'ny polyurethane manafatra izay manana fangaraharana avo, malefaka, malefaka tsara sy haingana aorian'ny fisasana, fiaretana tsara sy vahaolana fanoherana, fahazoana rivotra tsara, tsy misy loto, ect.
JL-TPU vovoka menaka mafana dia vita amin'ny polyurethane manafatra izay manana fangaraharana avo, malefaka, malefaka tsara sy haingana aorian'ny fisasana, fiaretana tsara sy vahaolana fanoherana, fahazoana rivotra tsara, tsy misy loto, ect. Iray amin'ireo akora tsy ilaina amin'ny fanaovan-gazety famindrana hafanana izy io.